Reniranon’Ikopa : mampidi-doza ny trondro | NewsMada
Reniranon’Ikopa : mampidi-doza ny trondro
Nanaitra ny mpandalo, omaly, ny fitsipatsipaky ny trondro tetsy amin’ny tetezan’Ampasika. Ritra rahateo ny rano ka mora nosakaina ireo trondro. Nahavariana fa mora mora nalaina izy ireny ary nahafeno koveta mihitsy ny olona.
Omaly ihany, nandefa filazana ny ministeran’ny Harena anaty rano sy ny jono mikasika ny trangan-javatra hafahafa miseho amin’ny trondro avy ao amin’ny ranon’Ikopa. Mampitandrina ny besinimaro ity minisitera ity mba tsy hihinanan’ny mponina ireo trondro hita fa mamo na mitsingevana izay mbola tsy fanta-pototra, ao amin’ny reniranon’Ikopa, ao amin’ny faritra anelanelan’ny tetezan’Ampasika sy ny lalana mankany Ambohitrimanjaka.
Iangaviana mba hanatona ny tobim-pahasalamana akaiky azy indrindra izay mahatsapa fisehoan-javatra hafahafa, ho an’ireo olona izay efa nihinana tamin’ireo trondro ireo. Nilaza ny tatitry ny minisiteran’ny Harena anaty rano sy ny jono fa hisy ny fanadihadiana sy ny fandinihana hatao hamaritana ny antony mety ho nahatonga ireo trondro nitsingevana sy mamo ireo. Mila mailo, araka izany, amin’ireo trondro miparitaka tampoka eny an-tsena fa mety hitera-doza.